Wardii"drill-down" haaraa odeeffannoo dabalataa wa'ee man'ee qinxaa waliin saaga. Wardii "drill-down" saaguf man'ee qinxaa lama cuqaasuu dandeessa. Wardii haraan tarreewwan cita tuutaa madda deetaa jalqabaa kan bu'aa deetaa man'ee ammaa keessatti agarsiifame agarsiisa.
Wantootni dhokataan hin madaalaman,tarreen wantoota dhokatee keessatti ni hammatama. Agarsiisan baldhiintaa kan argamuu gabateewwan qinxaa kan hangiiwwan man'ee ykn kuusaa deetaa irratti hunda'uu qofaafi.
Title is: Baldhiintaa agarsiisi(qinxaa)